Ikhabhinethi yomlambo-Abathandi beNdalo! Izilo ezinobubele!
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguAlice & Scott
UAlice & Scott ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Ngelixa siPet Friendly, sibiza intlawulo eyongezelelweyo kwimeko nganye. Nceda ubuze!
Jabulela ukuzola komlambo i-Bogue Chitto kwi-Blue Heron Cabin. Le khabhathi yasemanzini ihleli kwiihektare ezi-2 kwaye inika iimbono ezintle zomlambo kunye nendalo. Ikhabhathi iqaqambile kwaye icocekile kwaye ibonelela ngeendawo ezininzi ezingaphandle, kubandakanya ishawari yangaphandle kunye neeveranda ezintathu. Iikayak ezimbini ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo.
Ngaphakathi kwikhabhinethi kukho igumbi lokuhlambela elineshawari, igumbi lokulala elinebhedi egcweleyo, kunye neebhedi ezimbini kwialcove. Ikhabhinethi ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo xa uyipheka okanye uyitshisa, kubandakanywa izitya, iimbiza neepani, ifriji encinci, iigrill zamalahle amabini, isitovu segesi kunye ne-oven yetoaster. Ngenxa ye-Covid-19, sicela ukuba iindwendwe zincede zize nezazo izinto zokupheka ezityiwayo, njengeziqholo.
Izinto esizithandayo kwikhabhini ziquka:
- Ukonwabela ikofu yasekuseni kwiveranda
- Ukujinga ngasemlanjeni
- Ukubeka izitulo emlanjeni ukuze uhlale kwaye wonwabele amanzi apholileyo, acocekileyo *umlambo kufuneka wonwabele ngononophelo.
- Ukukha iintyatyambo zasendle ecaleni kwendlela eya kwindlwana
- Ukufunda eziko kwimozulu epholileyo
- Ukusela utywala ngokuhlwa phantsi kwezibane zentambo
-Sijonge igongqongqo eliluhlaza okwesibhakabhaka eliligama lekhabhinethi yethu.
Amanqaku abalulekileyo malunga neBlue Heron Cabin:
- Inkonzo yamanzi inikezelwa ngumthombo. Ukuba awuyonwabeli incasa yamanzi omthombo, unokucinga ngokuzisa amanzi asebhotileni.
- Ikhabhinethi yeBlue Heron yindawo yokuzimela emahlathini. Ke ngoko, unokuhlangabezana nazo zonke iintlobo zendalo, kubandakanya izilwanyana ezahlukeneyo kunye nabagxeki. Into yokugxotha iingcongconi iyafumaneka kwindlwana.
- Njengoko uza kubona phantsi kwecandelo lezinto eziluncedo, ikhabhathi ayinayo i-wifi okanye iTV. Yindawo egqibeleleyo yokuqhawula kunye nokuphumla. Nangona kunjalo, inkonzo ye-AT&T yomelele kakhulu kwindawo.
-I-retriever yethu yegolide ihlala nathi kwi-cabin ngexesha lotyelelo lwethu. Ngelixa sisenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba akukho nwele zenja zishiyekileyo, sifuna ukuba uqaphele xa unokungavisisani nezinja.
- Samkela iintsapho kwindlwana! Nangona kunjalo, kulabo abanabantwana abancinci, nceda uqaphele ukuba kukho amanyathelo amaninzi ajikeleze i-cabin, i-cabin ayikho-ubungqina bomntwana, kwaye i-cabin ibekwe ngqo emlanjeni (akukho cingo okanye umqobo). Ipakethe-n-play iyafumaneka.
-Ipropati ineeshawari ezimbini. Nangona kunjalo, akukho bhafu.
Sifumane kwi-Instagram nakuFacebook @blueheroncabin_ms kunye #blueheroncabinms
4.84 ·Izimvo eziyi-82
4.84 · Izimvo eziyi-82
I-cabin ibuyele kwisahlulo sabucala somhlaba omkhulu. Kukho abanye abanini beepropathi abaliqela kwindlela yethu- kodwa awuzukubona namnye kubo. Uninzi lwabamelwane bethu ngqo ziinkomo ngaphesheya komlambo!
Umbuki zindwendwe ngu- Alice & Scott
Sihlala eNew Orleans kwaye sihlala sifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi! Sinolawulo lwasekhaya olufumanekayo kwimeko yongxamiseko! Sazise nje into oyifunayo - kwaye siza kuyenza yenzeke!
UAlice & Scott yi-Superhost